အသေးစိတ်နှင့်စျေးနှုန်းများကိုထုတ်ဖော် | Androidsis
Honor 7X အသေးစိတ်နှင့်စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်
ဟိုဆေး Alfocea | | မိုဘိုင်း, NOTICIAS
Honor X စီးရီး၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာ၎င်းကိုကမ်းလှမ်းသည် အနိမ့်စျေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်မား။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၅ Honor 5X သည်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သတ္တုကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကိုပေးသည့်ပထမဆုံး Android ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် Honor 2015X သည်တရားဝင်ထုတ်လုပ်မှုဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြင့်အထက်ဒေါ်လာထက် ၅၀ သာစျေးကွက်ဖြင့်ယခင်က၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။
ယခုဤစီးရီး၏တတိယမျိုးဆက်သည် ဂုဏ်အသရေ 7X, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်လုပ်ဖို့အကြောင်းပါ။ သင်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောချဉ်းကပ်မှုကိုသင်စောင့်ရှောက်မည်လား။ ကြည့်ရအောင်
Honor 7X: ဒီဇိုင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း
စက်တင်ဘာလတွင် Honor သည်စက်တင်ဘာလတွင် Weibo ၌သူမ၏ဖုန်းအသစ်အတွက်စာသားကိုတင်ခဲ့သည် လွှတ်တင်မှုကိုအောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်သို့သော်၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မည်နှင့်တင်ပို့မှုစတင်မည်ကိုမရှင်းလင်းသေးပါ။ တရား ၀ င်ဈေးနှုန်းသည်မသိသောအရာဖြစ်သော်လည်းကောလာဟလများကညွှန်ပြနေသည် 270 $.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သတင်းအချက်အလက် တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးအာဏာပိုင်များ၏ TENAA ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Honor 7X နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာသိထားသည်။6အချိုး: 18 နှင့်အတူ9လက်မ နှင့် resolution 2160 × 1080 pixels ။ အတွင်းပိုင်းကတစ်အိမ်ပါလိမ့်မယ် Kirin 659 ပရိုဆက်ဆာ ကြောင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားပါလိမ့်မည် RAM ကို4GB အထိ y သိုလှောင်မှုပမာဏ ၁၆ GB တစ် microS ကဒ်ကိုအသုံးပြု။ ချဲ့နိုင်။
ဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံကဏ္sectionတွင် Honor 7X ၏ပုံစံကိုတင်ပြလိမ့်မည် dual- အဓိကကင်မရာ 12 MP sensor နှင့်အတူအခြား2MP sensor နှင့် 8 MP ရှေ့ကင်မရာတို့ပါရှိသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်တာ ၀ န်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သည် 3.240 mAh ဘက်ထရီ.
တစ် ဦး ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ အနောက်ဘက်တွင် Honor 7X သည်အနက်ရောင်၊ အပြာနှင့်ရွှေရောင်သုံးရောင် ရှိ၍ အလွန်ပါးလွှာသည့်သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလေးချိန်မှာ ၁၆၅ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး ၁၅၆.၅ x ၇၅.၃ x ၇ ၆ မီလီမီတာရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ Android Nougat နှင့်ထွက်လာမည်မဟုတ်ဘဲ Android Oreo နှင့်ထွက်မည်မဟုတ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Honor 7X အသေးစိတ်နှင့်စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်
Android မှ URL ကိုအတိုကောက်ရန်အကောင်းဆုံး application
Action Launcher ဖြင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင် Pixel2search box ကိုယခုသင်ရရှိနိုင်သည်